देउवाका ज्योतिष माओवादीमा प्रबेश गरेपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने — Imandarmedia.com
देउवाका ज्योतिष माओवादीमा प्रबेश गरेपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्नुको गम्भीर रहस्य खुलेको छ।मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ समस्याहरू देखा परेका छन्। समस्यै समस्या भएका पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धन भएको समस्यामा हुनु स्वभाविकै हो। ज–जसलाई समस्या परेको छ उनीहरू नै यो गठबन्धनमा छन्।
समस्यै समस्या भएका पार्टीहरू मिलेर गठबन्धन बनाएपछि त्यसबाट समस्याबाहेक अर्को उत्पादन नहुने पक्कै भयो । अहिले भइरहेको त्यही हो । अब प्रश्न उठ्छ, यसको समाधानचाहिँ कसरी निकाल्ने ?यसबारे चाहिँ अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने यो भन्ने हैसियत अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले होइन, पश्चिमतिरका कुनै ज्योतिषले मात्रै राख्ने गर्छ।
सुनिन्छ, प्रधानमन्त्री देउवा अहिले त्यही ज्योतिषले भनेअनुसार काम गर्दै हुनुहुन्छ ।उहाँ यतिबेला न माधव नेपालले भनेको मान्नुहुन्छ, न प्रचण्डले भनेको मान्नुहुन्छ, न उपेन्द्र यादवले भनेको मान्नुहुन्छ । उहाँ केवल त्यही ज्योतिषले भनेको मात्रै मान्नुहुन्छ । ज्योतिषले असोज महिनाभरि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्नु भनेको छ रे।
अब ज्योतिषले विस्तार नगर्नू भनेपछि कसरी विस्तार गर्ने ? त्यो त सम्भवै छैन। यदि माधव नेपाल वा प्रचण्डहरू आफूले भनेको पनि प्रम देउवाले मानोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले एउटा काम गर्नुप¥यो, त्यो ज्योतिषलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने। ज्योतिषै आफ्नो पार्टीको सदस्य भएपछि उनलाई ह्वीप लगाएर भए पनि यो गर, यो भन भन्न सकिन्छ होला नि। कि कसो ?
जसपाले पायो चार मन्त्रालय, मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई यादव आफै सरकारमा नजाने निश्चित: जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले चारवटा मन्त्रालय पाएको। जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पाएको हो। सो मन्त्रालयमा क–कसलाई पठाउने भनेर टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादलाई दिइएको छ।
मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले यादवलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकमा यादवले पार्टीले चारवटा मन्त्रालय पाएको जानकारी गराएका थिए। अध्यक्ष यादवले भोलि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन्। कार्यकारिणी समितिबाट पनि मन्त्रीको नाम चयन गर्ने बारेमा म्याण्डेट लिइने बताइएको छ।
यसैबीच बैठक स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारमा यादव आफै सहभागी नहुने भएका छन्। जसपाको भागमा चार मन्त्रालय मात्र परेको हुनाले यादव सरकारमा नजाने लगभग निश्चित रहेको एक सांसदले बताए । उपप्रधानमन्त्री सहित चारवटा मन्त्रालय दिएको भए यादवको जाने सम्भावना हुनसक्थ्यो। तर उपप्रधानमन्त्री नपाएपछि उनी आफै सरकारमा नजाने लगभग पक्का भएको हो।
पार्टीका अध्यक्ष यादव मात्र होइन, पार्टीका अरु शीर्ष नेता डा.बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि सरकारमा नजाने कुराकानी भएको बताइएको छ। उनीहरुले सरकार र संगठनमाथि निगरानी गर्ने छलफलमा उठेको ती सांसदले बताए ।यद्यपी भोलि कार्यकारिणी समितिको बैठकमा पनि छलफल भएपछि यादवले अन्तिम निर्णय लिनेछन्।
मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउन सत्तापक्षीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
चार जना शीर्ष नेताहरु ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म एक घण्टा छलफल गर्नुभयो छलफलमा मन्त्रिमण्डल विस्तारकै बारेमा कुराकानी भएको बुझिएको छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘आज मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पहिला मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने मन्त्री हुनेको नाम दिन दलहरूसँग आग्रह गरिरहेका छन्। गठबन्धनमा पहिला भएको सहमति अनुसार ६, ६ वटा मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने भनेपनि पछिल्लो समय सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय र मन्त्री भाग लगाउने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरु सहमतिबाट पछि हट्न नहुने बताइरहेका छन्।